Android Marshmallow အတွက် Root မပါသည့်အကောင်းဆုံး Pokemon Go သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, Android ဂိမ်းများ, ပိုကီမွန် Go ကို, လဲ tutorial
ဒီနေ့ Androidsis video channel မှာလာတဲ့တောင်းဆိုမှုများစွာကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီး၊ အကောင်းဆုံး Root မပါဘဲ Pokemon Go ကို hack နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Android Marshmallow ဗားရှင်းနှင့်အတူဆိပ်ကမ်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
အိမ်မှထွက်ခွာစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့ကို Pokemon Go ကိုကစားခွင့်ပေးသော Pokemon Go ကို hack သည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာသို့မဆိုဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းနှင့်ရောဂါပြproblemsနာများကြောင့်အိမ်မှထွက်ခွာခွင့်မပြုနိုင်သောသုံးစွဲသူများအားစိတ်ကျေနပ်စေမည့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သော virtual joystick ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။ Pokemon Go ကိုလမ်းပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုယူဆရသည့်ပထဝီနယ်မြေတွင်နေထိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အားလုံးကစားသမားတွေအတွက်ဒီဟာက Pokemon Go ဟာဒီ Root ကိုမလိုအပ်ပဲ hack လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီရရန် Pokemon Go ကို Root မရှိရင် hack လိုက်ပါ အဲဒီစွမ်းအားကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ် အပြင်ကိုသွားစရာမလိုဘဲ Pokemon Go ကိုကစားပါဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်လုံခြုံမှုမှ Android အတွက်အခမဲ့အခမဲ့ application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်ရုံသာဖြစ်သည်။ ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏ device ကို configure လုပ်ရန်သာရှိသည်။ ဒီပို့စ်ရဲ့အစ၊ ဒီနေရာမှာငါအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအနည်းငယ်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့အဆင့်များ -
1 အကောင်းဆုံး Rok မပါဘဲအကောင်းဆုံး Pokemon Go hack ကိုခံစားရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်ချိန်ညှိချက်များ
2 Samboking အတု GPS ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
အကောင်းဆုံး Rok မပါဘဲအကောင်းဆုံး Pokemon Go hack ကိုခံစားရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်ချိန်ညှိချက်များ
Android 6.0 Marshmallow terminal ရှိသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ Samboking အတု GPS ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ထားခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ developer ရွေးချယ်မှုများကိုဖွင့်ပါ ငါဒီဗီဒီယိုမှာညွှန်ပြအဖြစ်.
developer ရွေးချယ်စရာများနှင့် option ကိုဖွင့်ပါ တည်နေရာ app ကိုစမ်းသပ်ပါ အသစ်ထည့်သွင်းကိုရွေးပါ GPS အတု.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ချိန်ညှိချက်များနှင့်ရွေးချယ်မှုသို့သွားပါ တည်နေရာ o တည်နေရာကိုရွေးပါ တိကျသောသို့မဟုတ် GPS စနစ် Wifi ကွန်ယက်များနှင့်ဒေတာပိုများသည်။
Google ချိန်ညှိချက်များနှင့်တူညီသောရွေးစရာကိုထည့်ပါ တည်နေရာတည်နေရာသမိုင်းကို enable ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိရိယာ၏။
GPS စနစ်အတုကိုဖွင့ ်၍ Pokemon Go စူးစမ်းလိုသည့်နေရာကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရွေးချယ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ box ကိုနှိပ်ပြီး option ကိုနှိပ်ပါ GPS ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ပါထို့နောက် option ကိုရွေးချယ်ပါ Pokemon သွားအတွက်အသုံးပြုပါ.
Pokemon Go ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့စွာကစားနိုင်အောင် Joystick ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောအပိုင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့်ရေပေါ်ခလုတ်ပုံစံဖြင့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်သည့် virtual Joystick ကို အသုံးပြု၍ မသုံးပါနှင့်။
Fake GPS ၏တည်နေရာအတု ၀ န်ဆောင်မှုမှထွက်ရန်သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ floating winged icon ကိုနှိပ်ပြီး GPS application အတုဖွင့်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏နောက်ကျောခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး app ၏ထွက်ပေါက်ကိုအတည်ပြုပါ။ အရင်ကလိုပဲ Pokemon Go ကိုပုံမှန်ကစားလို့ရတယ်။
Samboking အတု GPS ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Fly GPS-Location အတု / GPS အတု
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » အကောင်းဆုံး Pokemon Go Hoot မရှိဘဲ၊ Android Marshmallow အထူး
InstaEm ရင်ပြင်တွင် Instagram အတွက်သီးနှံမရှိပါ ဟုသူကပြောသည်
IMO အကြောင်းဘာမှသဘောတူသောသူ fab ကြသနည်း
InstaEm ရင်ပြင်တွင် Instagram အတွက်သီးနှံမရှိပါ
lolipoop 5.0.2 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ ပြီးပြည့်စုံသော mmalowow အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြည့်ပါ၊ ပထမ ဦး ဆုံးကောင်းတာ၊ pokeballs နဲ့ pokemon တွေကိုပိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ အခုငါ pokeparada ကိုသွားတိုင်းငါဘာမှမကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး။
Ariel tapia sepulveda ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့ထပ်တူအတူတူပါပဲ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပြီးနောက် pokestop ဘာမှမပေးနှင့် pokemons လွတ်မြောက်ရန်
Ariel Tapia Sepulveda အားပြန်ပြောပါ
ဂိမ်းသည်သင်အလွန်မြန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်မြန်ဆန်စွာသွားခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ မမျှတခြင်း၊ သင်နေမည့်နေရာကိုရှာခြင်း၊ ထိုနေရာတွင်ရှိသည့်ရပ်နားသည့်နေရာကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ၅ မိနစ်မှ ၅ အတွင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်း၊
Nintendo သည်သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေသောကြောင့်သင်၏မြို့မှပြောင်း။ မသွားရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ IP တည်ရှိမှုကြောင့်သင်၏တည်နေရာကိုတုပရန် VPN ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
Diego မှ Martin Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
မင်းဖြေရှင်းနိုင်မလား သူကကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုလိုချင်တဲ့လမ်းညွှန်ကိုပို့ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရပ်နေတယ်၊ ​​ဘာမှမရှိဘူး
Diego Martin Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ Android Android ၏ဗားရှင်း ၅.၁ ရှိပါကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုနေရာသို့ပို့သော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမထင်ရှားပါ။
Juan José p ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ wiko Jerry ရှိပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်းမှထွက်မလာပါ။ ကောင်းပြီ၊ ထွက်လာပေမယ့်စာမျက်နှာဖွင့်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားတယ်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ…
Juan José lo p ကိုစာပြန်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ Android 6.0.1 အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါသလား။ Pokeparadas တွေကအရာဝတ္ထုတွေကိုပေးပေမယ့်ပိုကမ်မန်းတွေကမထုတ်ပေးဘူး။
ငါအဆင့် ၇ မှာအရမ်းကောင်းကောင်းရောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၈ ခုထဲမှာ box တစ်ခုအကြောင်းပြောထားတယ်၊ အဲဒါကငါနဲ့မတူဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကမှားသွားပြီလို့ငါ့ကိုပြောနိုင်တယ် ...
ဟယ်လို။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာ Android7အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုသည်ဘက်ထရီကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးတစ်နေ့တာအတွက်သင်ပိုရှာရန်အတွက်ဖြစ်သည်
အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်မျိုးစုံထပ်မံတပ်ဆင်ရန် Android အက်ပလီကေးရှင်းများ